प्रविधिको प्रयोग बढ्नु स्वाभाविक अनि राम्रो कुरा हो, तर प्रविधिको मात्र भर परेर आफ्नो मौलिक संस्कृतिचाहिँ लोपोन्मुख हुँदै गएकोमा चिन्ता लाग्छ । हाम्रो मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
आदित्य बुढाथोकी, अभिनेता/निर्देशक
तिहार हाम्रो मौलिक पर्व हो । यो पर्वमा समयअनुसार प्रविधि प्रयोग गरिँदा हाम्रो परम्परालाई भुल्नु हुँदैन । प्रविधिलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, तर त्यस क्रममा हामीले मौलिकतालाई बिर्सनु हुँदैन । तिहारमा कृत्रिम र आयातित वस्तुको सुन्दरतामा रमाउने भन्दा हाम्रा दियो, बत्ती, मखमली फूलसहित गाउँठाउँका उत्पादन एवं परिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
ज्ञानेन्द्र खड्का, पत्रकार
सबै सँगै हुँदा रमाइलो हुने चाडपर्वमा हिजोआज मानिसहरू प्रविधिका कारण आ–आफ्नो ठाउँमै रमाउन थालेका छन् । भेटूँ–भेटूँ लाग्ने मनहरू प्रविधिका कारण टाढाबाटै सँगै भएझैं खुसी हुन थालेका छन् । खुट्टा छोई आशीर्वाद थाप्ने शिरहरू प्रविधिका अगाडि शिर झुकाई आशीर्वाद लिन थालेका छन् । एक–अर्काको दु:खसुखमा रसाउने आँखाहरू प्रविधिका अगाडि टोलाउन थालेका छन् । आफन्त एवं साथी–भाइहरू लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइबका आधारमा केलाइन थालेको छ ।
अराज केशव, गायक
मुख्य ठाउँमा अर्थात् लक्ष्मीको पूजा हुने ठाउँमा दियोको प्रयोग उपयुक्त हुन्छ । बाँकी ठाउँमा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग ठीकै हुन्छ । तिहारलाई मदिरायुक्त अनि होहल्ला गर्ने किसिमले मनाउने चाडका रूपमा लिइँदै गएकाले चिन्ता बढाएको छ । यस्तो बेला दियोले आगलागी हुने खतरा हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय बत्ती नै ठीक लाग्छ । अहिले विद्युत्को आपूर्तिमा सुधार आएकाले पनि राम्रो भएको छ । तिहारको वास्तविक महत्व सञ्चारमाध्यमबाट आउन जरुरी छ ।
मदन गोपाल, गायक/संगीतकार
चाडपर्व आफन्त, साथीभाइ एवं परिवारबीच रमाइलो गर्न अनि खुसी साट्नका लागि नै हो । प्रविधिको प्रयोगले झिलिमिली तिहारमा रौनक छर्छ भने यसको प्रयोग नराम्रो होइन ।
विस्तारै हामीले आफ्नो मौलिकतालाई गुमाउने पो हौ कि भन्ने डर लाग्छ ।
तिहार, हाम्रो मौलिकतासँग जोडिएको छ । यसको आफ्नै स्वरूप छ । झिलिमिली बत्ती पनि यसको प्रमुख विशेषता हो । अहिले दियो बत्तीको सट्टा विद्युतीय बत्ती बाल्ने चलन बढेको छ । यसलाई आधुनिक समाजको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, तर हाम्रो मौलिकता के हो, दियो बालिनुको महत्व, यसको अर्थ के कस्तो छ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । हाम्रो मौलिक संस्कृति, रहनसहन आदि कुरामा पनि विशेष ध्यान दिई सकेसम्म दियो नै बाल्नुपर्छ । यद्यपि दियोको जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्छ ।
प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएका कृत्रिम शुभकामना तथा प्लास्टिकका फूलहरूप्रति घृणा लाग्छ र म तिनको प्रयोग पनि गर्दिनँ  । तिहारमा खेलिने देउसी–भैलो मीठो आवाजमा भट्याएको असाध्यै मन पर्छ ।
मनोजकुमार अधिकारी, वातावरणीय अभियन्ता
हामीले आफ्नो परम्परा भुलेको अवस्था छ । अब त तिहारको गीत पनि जे पायो त्यही आउन थाल्यो ।
हामीले पुरानो संस्कार पछ्याउनुपर्छ । पालाको उज्यालो बिछट्टकै रमाइलो किसिमको उज्यालो हुन्छ । जुन उज्यालो विद्युतीय बत्तीबाट प्राप्त हुन सक्दैन । हामी रात–दिन बत्ती बाल्छौं तर तिहारमा पालामा बालिने दियोजत्तिको मूल्यवान विद्युतीय सामग्री हुँदैन । त्यसैले बत्तीको उज्यालो भन्दा पनि दियोको उज्यालो आवश्यक छ ।
स्मृति पोखरेल, गायिका
प्रविधिको प्रयोग भन्दा हाम्रो आफ्नै मौलिक कुरामा जोड दिन आवश्यक छ ।
परम्परागत चलन एवं रीतिरिवाजको सुन्दरता छुट्टै हुन्छ । फेरी प्रविधिको प्रयोग कृत्रिम देखिन्छ, जसले हाम्रो तिहारको वास्तविक सुन्दरता र शोभा घटाउँछ ।
सुविन्द्र केसी, गायक
विज्ञान प्रविधिको युगमा यसको प्रयोगलाई अन्यथा कसरी मान्नु ? तर प्रविधिले मौलिकतालाई भने बिस्तारै खाइदिँदै गयो । माटाको पालामा तेलको दियो बालेको खोज्नुपर्ने अवस्था आउनुचाहिँ सकारात्मक होइन कि ?
गलत जस्तो लाग्छ, चाडपर्व हाम्रो धर्म, संस्कृति एवं परम्पराअनुसार मनाउनुपर्छ । प्रविधिको नाममा हामीले आफ्नो संस्कार, संस्कृति एवं परम्परालाई भुल्दै त छैनौं ?
सरु गौतम, गायिका
समयअनुसार ठीकै हो, तर त्यसले अरूलाई असर गर्नु भएन ।
कविराज गहतराज, कोरियोग्राफर
प्रविधिको प्रयोग देशको संस्कृति तथा परम्परा अनि समाजलाई आँच नआउने किसिमले गर्नु उचित हुन्छ अन्यथा राम्रो हुँदैन ।
यो समयको माग हो । विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै नयाँ पुस्ताको रुचि, चाहना एवं स्वाद फरक हुनु स्वभाविक हो । यद्यपि आफ्नो कला–संस्कृतिको मर्म पनि मार्नु हुँदैन ।
इच्छा–आवश्यकताअनुसार ठीकै हो, तर प्रविधिको दुरुपयोग हुनु भएन ।
प्रविधि भनेको मानिसले आफ्नै सजिलोका लागि बनाएको कुरा हो । यद्यपि अहिलेको स्थितिमा हामी आफै त्यही प्रविधिको दास भएजस्तो लाग्छ । यसले गर्दा सम्बन्धहरू परपर हुँदै जान्छन् कि ?
विजय बराल, रंगकर्मी/अभिनेता
प्रविधिको प्रयोग बढ्नु राम्रो हो, तर कसले कसरी प्रविधिको प्रयोग गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । प्रविधिको प्रयोग गर्नु पनि पर्छ र चाहिने जति अर्थात आवश्यकभन्दा बढी प्रयोग नगर्दा राम्रो ।
चिरन्जीवी भण्डारी, गायक
हाम्रो संस्कार–संस्कृतिको पहिचान हराइरहेको छ । सबै नेपाली आफ्नो अस्तित्वका लागि सचेत हुनुपर्‍यो ।
यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो, जसले जस्तो रूपमा प्रयोग गर्छ, त्यस्तै हुने हो । त्यसकारण सबैमा प्रविधिको सही प्रयोग गर्दै आफन्त एवं साथीभाइहरूसँग तिहार मनाउनु होला भन्न चाहन्छु ।
गजित विष्ट, अभिनेता
प्रविधिले टाढा भएकाहरूलाई नजिक त ल्यायो तर नजिक भएकाहरूलाई चाहिँ टाढा बनाउँदैछ ।
निश्चल बस्नेत, निर्देशक/अभिनेता
अहिले विश्व नै डिजिटलाइज्ड छ । हामी प्रविधिमा बढी आश्रित हुँदैछौं । प्रविधिले परिवार तथा आफन्तहरूलाई औंला चलाएको भरमा नजिक्याउँछ । विश्वलाई एउटै घर बनाउन प्रविधिले ठूलो भूमिका खेलेको छ । तिहारमा पनि प्रविधिका कारण धेरै परिवारले सँगै भएको महसुस गर्न पाएका छन् ।